တကယ့်ဥပေက္ခာ – TodayZ
ဥပေက္ခာရဲ့ သဘောတရားကို လူတွေက အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲနေတယ်။ မခေါ်မပြော၊ ဂရုမစိုက်ဘဲနေတာကို ဥပေက္ခာလို့ ထင်နေကြတယ်။ အမှန်မှာ ဥပေက္ခာက မေတ္တာထက်လည်းသာတယ်၊ ကရုဏာထက်လည်းသာတယ်။
ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ သဘောတရားက …. လူဆိုတာ သူ့ကံနဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဆဲသွားရင်လည်း ငါ့ဆဲရမလားလို့ စိတ်မဆိုးဘူး။ ဥပေက္ခာသမားသည် လာရောက်ပြီးတော့ ချီးမွမ်းပြီးတော့ အကူအညီပေးရင်လည်း “သြော် … ဒီကောင်က တော်တယ်၊ ငါ့ကို ချီးမွမ်းဖော်ရတယ်၊ ငါ့ကို ကူညီဖော်ရတယ်´´ ဆိုပြီးတော့ ဝမ်းမသာဘူး။
ဆိုလိုတာက စိတ်ဓာတ်အလွန်တည်ငြိမ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အနေအထားမျိုးကို ဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်အလွန်တည်ငြိမ်တယ်။ စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီး လူကိုလျစ်လျူမရှုဘူး၊ လူ့ရဲ့ အပြုအမှုကိုသာ လျစ်လျူရှုပြီး လုပ်သင့်တာ လုပ်တယ်။
ဆိုပါစို့ …. လူတစ်ယောက် အကူအညီလိုနေတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ သို့သော် သူက ဆဲပြီးတော့ ခိုင်းတယ်။ စိတ်မဆိုးဘူး။ လုပ်ပေးတယ်။ တစ်ယောက်က ချော့ပြီးတော့ ခိုင်းတယ်။ ဝမ်းမသာဘူး လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒါ ဥပေက္ခာ။ ဝမ်းသာနေတယ်တို့၊ စိတ်ဆိုးနေတာတို့ဆိုတာက စိတ်မှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိတာကိုပြတယ်။ တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ သဘောကိုပြနေတာ။ အခု လူတွေက ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ကောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဥပေက္ခာဆိုတာ အေး … ကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့သူ ဒီကောင်မ မခေါ်မပြောဘဲနေလိုက်တယ်၊ ဥပေက္ခာပြုထားတယ် မခေါ်မပြောဘူး၊ စကားလည်း မပြောဘူး၊ သူ့ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ အဲဒါ ဥပေက္ခာ။ ဒီလို မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီဥပေက္ခာက တစ်မျိုး၊ ဒီမွန်မြတ်တဲ့ ဥပေက္ခာ မဟုတ်ဘူး။
မွန်မြတ်တဲ့ဥပေက္ခာဆိုတာ တစ်ဖက်သားလုပ်တာကို ဂရုစိုက်ပြီးတော့ မနေဘူး၊ လုပ်သင့်တာလုပ်တယ်၊ ဒါမှ တကယ့် ဥပေက္ခာ။ ဆဲလည်း ဂရုမစိုက်ဘူး၊ လုပ်သင့်တာလုပ်မယ်။ ချီးမွမ်းရင်လည်း ဂရုမစိုက်ဘူး၊ လုပ်သင့်တာလုပ်မယ်။ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပေးမယ်။ စိတ်ဓာတ်ကတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားတယ်။ ဒါမှ တကယ့်ဥပေက္ခာပါ။
လူတွေမှာ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း ဆိုတာရှိတယ်။
ချစ်ရင် ချစ်မယ်.. မချစ်ရင် မုန်းမယ်..။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ဆိုတာ အစွန်းနှစ်ခုပဲ၊
စိတ်ဓာတ်မှာ balance မဖြစ်လို့
အဲဒီအစွန်းထွက်နေတဲ့ စိတ်ဓာတ်က လွတ်မြောက်ချင်လို့ရှိရင်
ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ဥပေက္ခာ ပွားရမယ်တဲ့။
– သတ္တဝါဆိုတာ သူ့ကံနဲ့သူ လာတာလို့ပွားရတယ်။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ထိုနှစ်မျိုးလုံးမပါဘဲနဲ့
ဒီကနေ့ အရပ်ထဲမှာတော့ “ဥပေက္ခာ” ဆိုတာ
ကိုယ်နဲ့မတည့်လို့ မခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို “ဥပေက္ခာပြုတယ်”လို့
ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ် မဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ equanimity လို့အင်္ဂလိပ်လို ပြန်တယ်။
equanimity ဆိုတာ စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုပဲ။
emotion ဆိုတဲ့ရာဂတို့ ဒေါသတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဥပေက္ခာဆိုတဲ့
ဟောထားတယ်နော်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒါကိုလည်းပဲ
(“စိတ်၏ထွက်ပေါက်များ” တရားတော်မှ ကောက်နှုတ်ချက်)
ကျွန်တော် , ယူနိုက်တက်နှင့် တောင်အမေရိက အလက်ဂျစ်
မိန်းမရေ… အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးပြောချင်တယ်…လာဦး လာဦး